कोरोना त्रासका बीच ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, यस्ताे छ तयारी — Imandarmedia.com
२ओली र प्रचण्ड-माधव, दुवै समूहलाई दलको मान्यता नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
३१४ गतेदेखि सुरु हुनेछ कोरोनाविरुद्ध खोप अभियान
४प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्धा दर्ता
५क्रान्तिकारी पत्रकार संगठनको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न, भए यस्ता निर्णय
६सकियो ओलीलाई कारवाही गर्न बसेको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक, के-के भए निर्णय ?
७ओलीमाथि पार्टीले बल्ल गर्यो यस्तो कडा कारवाही, साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशित
८तपाईंले चलाइरहेको सिमकार्ड कसको नाममा दर्ता छ ? आजै यसरी चेक गर्नुहोस्, नत्र फस्नुहाेला…
९सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच लफडा, के हाे लफडाकाे कारण ?
१०संवैधानिक इजलासमा भनाभन
११विश्वभर जाँदैछ चीनको खोप, नेपालमा आउँछ कि आउँदैन् ?
१२नेपालीहरुका लागि दुखद खबर, मलेसियाबाट एकैदिन आयाे १९ जनाको शव
कोरोना त्रासका बीच ओलीले बोलाए सर्वदलीय बैठक, यस्ताे छ तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार साँझ ४ बजेलाई बोलाइएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलक अध्यक्षलाई बोलाइएको छ । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई पनि बोलाइएको छ ।
बालुवाटार स्रोतका अुनसार भारतले नेपाली भूमि मिचेर सडक निर्माण गरेको विषयमा केकसरी अघिबढ्ने भन्ने बारे यो बैठकमा छलफल हुनेछ । साथै, पछिल्लो साता नेपालमा बढेको कोभिड संक्रमणबारे पनि छलफल हुने बताएइएको छ । ‘पछिल्लो परिस्थितिबारे दलहरु र पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट राय सल्लाह लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले बैठक बोलाउनु भएको हो,’ रिमालले भने ।
काठमाडाैंमा पुन: कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारले उपत्यका सिल गर्ने तयारी थालेको छ । आजको सर्वदलीय बैठकमा यस बिषयमा समेत छलफल हुनसक्नेछ । आज बुधबार मात्रै थप दुई जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २१९ पुगेको छ । कपिलवस्तुमा २२ वर्षीय पुरुष र बाँके नेपालगञ्ज–८ का ३६ वर्षीय पुरुष पुरुषमा पनि कोरोना संक्रमण देखिएको हो ।
टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिर कुमार अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि धुलिखेल अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाँकेका १ जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
उनहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या २१९ पुगेको छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका ३ जनासहित ८३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विनियोजित बजेटमध्ये दुई अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको छ । सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रुपमा यो रकम बाँडफाँट गर्छ । स्थानीय तहले पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना कार्यान्वयन गर्नेगरी यो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच लफडा, के हाे लफडाकाे कारण ?
संवैधानिक इजलासमा भनाभन
विश्वभर जाँदैछ चीनको खोप, नेपालमा आउँछ कि आउँदैन् ?
नेपालीहरुका लागि दुखद खबर, मलेसियाबाट एकैदिन आयाे १९ जनाको शव